Chelsea Oo Heshiisa Qaali Ah Ku Dooneeysa Federico Chiesa – Talyaaniga Waa Loosoo Dhigtay!! – Garsoore Sports
Chelsea Oo Heshiisa…
Kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay wax ka weydiisay heshiiska ay kula soo wareegi karto xiddiga reer Talyaani ee Federico Chiesa.
Chiesa ayaa haatan amaah ugu jooga Juventus waxaana uu ka tirsanyahay kooxda Fiorentina, laakiin waxa ay u muuqataa in Blues ay la xiriirtay Juve si ay uga codsadaan wadahadalada saxiixa weeraryahanka.
Wariye Christian Falke ayaa Twitterkiisa kusoo qoray ” @chelsea ayaa weeydiisay @juventus saxiixa @federicochiesa. waxay ugu yaboohday gundhigga gorgortan. 100 milyan oo yuuro. Juventus ayaa wadahadalada iska diidday.”
Haddii Chelsea ay u baahan tahay Chiesa waa inay isku daydo inay wax walba kala xaajooto Fiorentina maadaama Juve aanay lahayn xiddigan oo milkiyadiisa ay Fiorentina leedahay, waxaa laga yaabaa inay dhacdo in kastoo Chiesa uu amaah kaliya ku joogo Juventus, haddana waxay u badan tahay inay si uun u go’aansadeen inay si dhab ah u qaadan doonaan ikhtiyaarka ay kula saxiixan karaan si joogto ah.
Chelsea ayaa ku fiicnaan laheyd inay la soo wareegto ciyaartoydan tayada sare leh haddii ay awoodaan, iyadoo Blues ay dooneyso inay cusbooneysiiso heshiisyada labada ciyaaryahan ee aan bandhigyadooda aan joogtada ahayn ee Timo Werner iyo Kai Havertz.